Ukwenziwa Kabusha Kobunikazi Bomkhiqizo
Lwesihlanu 1 Julayi 2022
Ukwenziwa Kabusha Kobunikazi Bomkhiqizo Ugqozi lokucatshangelwa kabusha komkhiqizo futhi wenza kabusha kwakuyizinguquko ekushintsheni kwezimanjemanje kanye nokuhlanganiswa emasikweni enkampani. Idizayini yenhliziyo yayingasakwazi ukuba ngaphandle komkhiqizo, igqugquzela ukubambisana ngaphakathi nangabasebenzi, kepha nakumakhasimende. Inyunyana ehlangene phakathi kwezinzuzo, ukuzibophezela kanye nekhwalithi yensiza. Ukusuka ekwakhekeni kuye ngemibala, ukwakheka okusha kwahlanganisa inhliziyo ku-B nesiphambano ku-T. Amagama amabili ahlanganisiwe maphakathi enza i-logo ibukeke njengegama elilodwa, uphawu olulodwa, ukuhlanganisa i-R no-B ku inhliziyo.
Lwesine 30 Juni 2022
Ukwakheka Komkhiqizo Idizayini ye-EXP Brasil brand ivela ezimisweni zezinkampani zobumbano kanye nokubambisana. Ukufaka umxube phakathi kobuchwepheshe nokuklama kumaphrojekthi abo njengasezinempilo zehhovisi. Into yokuthayipha imele ubumbano namandla ale nkampani. Idizayini ye-X iqine futhi ihlanganisiwe kepha ilula kakhulu futhi inobuchwepheshe. Uhlobo lomkhiqizo lumelela impilo yesitudiyo, enezici ezinhlamvwini, zombili endaweni enhle nengalungile ehlanganisa abantu nokuklama, umuntu ngamunye noqoqekile, elula ngezobuchwepheshe, engasindi kanye ne-robust, ochwepheshe kanye nobuntu.
Lwesithathu 29 Juni 2022
Lwesibili 28 Juni 2022
Indlu Kusetshenziswa ukhuni njengento eyakhayo eyakha, indlu ihambisa amazinga ayo amabili esigabeni, ikhiqize uphahla olukhazimulayo ukuze luhlangane nomongo futhi ivumele ukukhanya kwemvelo ukungena. Isikhala sobude obuphindwe kabili sicacisa ukuthi ubudlelwane obuphakathi naphansi komhlaba, isitezi esingaphezulu nokubukeka komhlaba. Uphahla lwensimbi ngaphezulu kwezimpukane ezibukelayo, luwuvikela ekuhlaselweni yilanga lasentshonalanga futhi uvuselele ngokwakha ivolumu, lufake umbono wemvelo yemvelo. Uhlelo luvezwa ngokuthola ukusetshenziswa komphakathi phansi komhlaba nokusetshenziswa kwangasese esitezi esiphezulu.
Msombuluko 27 Juni 2022
Ukwenziwa Kabusha Kobunikazi Bomkhiqizo Ukwakheka Komkhiqizo Isethi Yekhofi Indlu Ifenisha Plus Fan Isihloko Esivulayo